ဘန်ကောက်-မဲဆောက် ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ သစ်ပင် ဝင်တိုက်ပြီး မီးလောင်မှု?? - Yangon Media Group
မဲဆောက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
မြန်မာအလုပ်သမားများ စီးနင်း လိုက်ပါလာသော ခရီးသည်တင် ယာဉ်ငယ်တစ်စီးသည် အောက်တို ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က ဘန်ကောက်- မဲဆောက်လမ်းမ ကြီးရှိ လမ်းဘေးသစ်ပင်တစ်ပင် အား ဝင်တိုက်မိပြီး မီးလောင်မှုဖြစ် ပွားကာ မြန်မာအလုပ်သမား ၁ဝ ဦးနှင့် ထိုင်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ငါးဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ယာဉ်ပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်း သူရောဆိုရင် စုစုပေါင်း ၁၆ ယောက် လိုက်ပါလာပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကိုးဦးက အခင်းဖြစ် တဲ့နေရာမှာတင် သေဆုံးတယ်။ ဒဏ်ရာရသူက ခုနစ်ယောက်ပေါ့။ အဲဒီခုနစ်ယောက်ထဲက နှစ်ယောက်က ဆေးရုံရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ ပဲ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား စုစုပေါင်း ၁ဝ ဦးနဲ့ ထိုင်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ငါးဦး ဒဏ်ရာရတယ်”ဟု မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာ ပြည်သားများအရေး ပူးတွဲလှုပ် ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များစီးနင်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသားယာဉ် မောင်း မောင်းနှင်သည့် 3D/…. အဖြူရောင်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန် ကောက်မြို့တော်အနီးရှိ စမွတ် စခွန်ခရိုင်၊ မဟာချိုင်မြို့မှ မဲ ဆောက်မြို့နယ်သို့ အောက်တို ဘာ ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ထွက် ခွာလာစဉ် ကန်ဖိုင်ဖစ်ခရိုင် ခေါင်းခူမြို့နယ် လုံစီခုံဒစ်(ခ်ျ) အနီး ကားလမ်းမိုင်တိုင် 421 ကီလိုမီတာသို့အရောက်တွင် မိုးရွာသွန်းသဖြင့် စလစ်ဖြစ်ကာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးတစ် ပင်တစ်ပင်ကို ဝင်တိုက်ကာ မီး လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကားမီးလောင်တဲ့အတွက် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသူ ထိုင်းယာဉ် မောင်းအပါအဝင် ကိုးဦးရှိပါ တယ်။ သေဆုံးသူတွေကို ‘ကဘန် ဖိဆေးရုံ’ကို ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါ ပြီ။ ဒဏ်ရာရသူ ခုနစ်ဦးကိုလည်း အဲဒီဆေးရုံကိုပဲ ပို့ဆောင်ကုသ ပေးနေပါတယ်”ဟု မဲဆောက်မြို့ မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စ တာ’ဖိဂျို’က ပြောသည်။ အဆိုပါယာဉ်မီးလောင်မှု ကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား ရှစ် ဦးနှင့် ထိုင်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦး စုစုပေါင်း ကိုးဦးမှာ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိ သူများကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး မြန်မာ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ထပ်မံသေဆုံး သွားခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာအလုပ် သမား စုစုပေါင်း ၁ဝ ဦးနှင့် ထိုင်း ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။
''ဖြစ်ချင်တာတွေကိုချည်းပဲ အသေဆုပ်ကိုင် မဆွေးနွေးကြပါနဲ့။ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ??
ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူးကျောက်တိုင်ကို ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် အောင်ပန်းမြို့၌ ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်